TharHtet — TIIDE
Home › TharHtet › Comments
A4 မှာ ပုံဆွဲဖို့ အခြေခံ ပုံစံခွက်တွေလုပ်ပေးထားပါတယ်။ * Mobile အတွက် * Web အတွက် (12 Col grids) ပြီးတော့ ဘယ်လိုဆွဲပြီး ဘယ်လို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူသလဲ Video တင်ပေးထားပါတယ်။ Mobile Phone ဖြင့် ဓါတ်ပုံ ရိုက်နည်း Video The result.
in Paper to Digital Prototype တည်ဆောက်နည်း Comment by TharHtet June 2018
Web Application ရဲ့အခြေခံ Concept အကြောင်း၊ HTTP Protocol, RESTful, CRUD တို့အကြောင်းကို ရှင်းပြထားတဲ့ Video ပဲဖြစ်ပါတယ်။ General အဖြစ် အားလုံး ကြည့်သင်ပါတယ်။ * Web - Basic Concept - Part 1 * Web - Basic Concept - Part 2
in Training Videos Comment by TharHtet June 2018
Try this https://api.jquery.com/jquery.parsehtml/
in jQuery အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်လို့ပါ။ Comment by TharHtet May 2018
That's right. Font embedding is for displaying only. If you want to post, you will have to use Unicode in input. We could add converter in Input. But we need to Hack vanilla forum source code.
in Font embedded is not comfortable for browser. Comment by TharHtet May 2018
in What is Git? Comment by TharHtet May 2018
in What is Ubuntu???? Comment by TharHtet May 2018
အထက်မှာ ကျွန်တော်တို့နှင့် အလုပ်သင်ဝင်ပါက ရွေးချယ်ရန် ၃ ခု ပြခဲ့ပြီ။ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် Zwenex ရဲ့ Software Enginner တွေသုံးတဲ့ Development Environment ကတော့ * Ubuntu Linux * Sublime editor/Vistual Studio Code/VIM/(there is one who is crazy e…
in Information for Zwenexsys's interns Comment by TharHtet May 2018
ကျောင်းသား/သူများ ၏ လိုလားချက်အလိုက် Group များကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မိမိ၏ အမည်ကို စာရင်းတွင်မတွေ့ပါက၊ မည်သည့်အဖွဲ့တွင်မှာ ပါဝင်ခြင်း မရှိသေးပါက စောလဲယဝေါ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ယခုတော့ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် နှင့် internship ၃ လကိုယ်ဖြတ်သ…
in Group အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စ Comment by TharHtet May 2018
Director များအကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်တယ် ကိုယ့်ဆရာတွေက ကြွားမပြောတော့ အထင်မကြီးမှာစိုးလို့ ကိုရာဝီ သူက ညီတို့ညီမတို့ ၂ နှစ် ၃ နှစ်သား အရွယ်ကတည်း IT နှင့် Software အလုပ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံခြားကို ရောင်းစားလာလာ။ အခု သင်တန်းပြစား နေတဲ့ နာမည်ကြီး…
Thanks ThorXinOo for heads up. The links are fixed.
in TIIDE Program ၏ Director များ၏ နှုတ်ခွန်းဆက် Comment by TharHtet May 2018
in Welcome To TIIDE Program and Forum Comment by TharHtet May 2018
TIIDE အကြောင်း * TIIDE ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က နာမည်မှာ ပါသလိုပဲ နည်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်သင် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် နည်းပညာ လုပ်ငန်းဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ဖိုပါပဲ။ * ၄ နှစ်တာ ပညာသင်ထားတဲ့ ကျောင်းဆင်းတွေ လုပ်ငန်းခွင် မဝင်ခင်၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့…
No worries. We did embed Unicode font into the Forum. Please type in Unicode. Thanks.
in Unicode or Zaw Gyi ? Comment by TharHtet May 2018